Bangiga Aduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya la rajaynayo in uu kobco 2.9% sanadkan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBangiga Aduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya la rajaynayo in uu kobco 2.9% sanadkan
September 9, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Suuq kuyaala Muqdisho. [Isha Sawirka: Reuters]
Nairobi-(Puntland Mirror) Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la rajaynayaa in uu kobco 2.9% sanadkan marka la barbardhigo sanadkii hore oo ahayd 2.8%, sida uu sheegay Bangiga Aduunka maanta oo Isniin ah.
Qiyaasta sare ee koboca sanadka soo socda ilaa shanta sanno ee socota ayaa ku tiirsanaan doona in dalka uu awoodo sii socoshada marxaladda isbadelka dhaqaalaha ee hadda, Bangiga Aduunka ayaa sidaa ku sheegay bayaan.
Cashuur uruurinta ay dowladdu sameysay ayaa kordhay 29% sanadkii hore, maadaama dhaqaaluhu kasoo kabtay abaar sanadkii hore isla markaana dowlada ay badasho siyaasadeeda canshuurta, Bangiga Aduunka ayaa sidaas yiri.
“In kasta oo horumarkan uu yahay mid dhiirrigelin leh, haddana maaliyadda ku harsan ee weli jirta kuma filna in lagu haqabtiro baahiyaha xaga waxbarashada iyo waaxaha caafimaadka,” ayuu yiri bangigu.
Bishii May, haayada lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ku socdo waddo sax ah balse waxay ka digtay in weli uu yahay mid diciif ah oo ay ugu wacantahay ammaanka, isbdalka cimilada iyo saboolka.
September 19, 2019 IMF oo qiyaasaysa in koboca dhaqaalaha Soomaaliya uu sii ahaan doono 2.9 boqolkiiba 2019, balse sicir bararku gaari karo 4.0 boqolkiiba
Wasiirka kalluumaysiga Puntland oo sheegay in dooni iyo kalluumaysato lagu la’yahay xeebaha gobolka Gaardafuu
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex madfac ayaa ku dhacay meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah oo ku sugan Muqdisho. Lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiicdaas [...]
Qaraxyo waa-weyn oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Qaraxyo waa-weyn ayaa saakay oo Axad ah laga maqlay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qaybta waqooyi, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxyada. warkan waa deg deg, [...]